SSM : Tsy manaja ny fifanarahana efa nisy -
AccueilSongandinaSSM : Tsy manaja ny fifanarahana efa nisy
SSM : Tsy manaja ny fifanarahana efa nisy
Mandrahona amin’ny alalan’ny hetsika fikomiana indray ny eo anivon’ny fikambanamben’ny sendika eto Madagasikara na ny SSM. Mazava ny fitakian’izy ireo tamin’ny alalan’ny fanambaran’ny sekretera jeneraliny, Jean Raymond Rakotoniasy, ny amin’ny tokony hanomezana hasina ny mpiasam-panjakana isan-tokony sy isan-tsokajiny ary koa mba hanomezana lanjany ny fitakiana ataon’ireo sendika maro, toa ny avy amin’ny fampianarana (Sempama), ny avy amin’ny fadin-tseranana (Sempidou), ny avy amin’ny fitsarana (SMM), ny avy amin’ny fananan-tany, sns.
Mazava anefa ny nambaran’ny praiminisitra Ntsay Christian fa efa nisy ny fihaonana tamin’ireo sendika, ary nisy ny fifanarahana sy fifanekena ka nahatonga ny fiantsoana ny mpiasa hiverina hamonjy ny asa sy ny adidy hiandraiketan’izy ireo eto amin’ny firenena. Tsiahivina hatrany ny fanambarana nataon’ny lehiben’ny governemanta fa ho vahana ny olana misy eo amin’ireo sendika ,saingy tsy ireo fangatahana rehetra fa misy ampahany ho raisin’ny Fanjakana an-tanana satria tsy ho vitan’ny tetibola avokoa izany…
Ankehitriny anefa, nivadi-belirano tamin’ny dinika nifanaovana teny amin’ny primatiora ireo sendika mivondrona eo anivon’ny SSM. Raha ny nambaran’izy ireo mantsy, dia hanao hetsika fitokonana faobe izy ireo izay miainga etsy Ambohijatovo anio. Ataon’ny SSM toa ny tsy misy izany ny dinika sy ny fifanarahana tamin’ny lehiben’ny governemanta fa ny fantatr’izy ireo dia ny famalian’ny Fanjakana ny fitakiana rehetra ao anatin’ny fotoana fohy. Anisan’izany ny an’ireo mpampianatra izay manao sorona ny mpianatra sy ny zana-bahoaka amin’izao fotoana izao. Raha ny nambaran’ny praiminisitra anefa, vola mitentina 155 miliara Ar ny tontaliben’ny fanavaozana ny tontolon’ny fampianarana. Voalaza fa mbola tsy misy an’io vola io eo am-pelatanan’ny Fanjakana amin’izao fotoana izao fa tsy maintsy miandry ny fampiharana ny tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana. Misy ihany anefa, araka ny fanazavana, ny ampahany amin’ny fitakian’ireo sendika no afaka tanterahin’ny Fanjakana mba ahafahan’ireo mpiasa miverina miasa sy hamahana ny olana amin’ny ampahany.
Tsikaritra ihany koa anefa fa misy amin’ireo sendika no manao fitakiana politika, toa ny fitakian’ny mpiasan’ny fadin-tseranana, izay mitaky ny fialan’ny minisitry ny Vola sy ny Tetibola mihitsy. Efa filam-boatsiary mihitsy ny an’ireo sendika sasany, ary efa mihoatra ny tokony ho izy sy tsy azo eritreretina…
Mazava anefa ny andraikitra hiantsorohana sy hanirahana ny governemanta amin’izao fotoana izao fa ny fanomanana ny fifidianana ihany no laharam-pahamehana.
Itaosy : tra-tehaka ny siramamy 35 taonina
Siramamy telo kamiao, izay milanja 35 taonina no saron’ny zandary avy ao amin’ny borigady Itaosy, ny alin’ny alatsinainy hifoha talata 06 Marsa lasa teo tokony ho tamin’ny 01 ora maraina. Fampilazam-baovao, avy amin’ny olona tsara ...Tohiny